Tahiry isam-bolana Jolay 2015 1 Lahatsoratra Oktobra 2014 5 Lahatsoratra
Janoary 2014 1 Lahatsoratra Desambra 2013 1 Lahatsoratra Oktobra 2013 3 Lahatsoratra
Jolay 2011 1 Lahatsoratra Jona 2011 1 Lahatsoratra Avrily 2011 3 Lahatsoratra
Desambra 2010 1 Lahatsoratra Novambra 2010 8 Lahatsoratra
Novambra 2009 1 Lahatsoratra Jolay 2009 1 Lahatsoratra Mey 2009 1 Lahatsoratra Janoary 2009 4 Lahatsoratra
Novambra 2008 1 Lahatsoratra Oktobra 2008 29 Lahatsoratra
Oktobra 2007 1 Lahatsoratra Septambra 2007 6 Lahatsoratra
Tantara tamin'ny Tselatra 28 Jolay 2015
Afrika Mainty Mamadibadika ny tantaran'i Madagasikara amin'ny alalan'ny sary fahiny Mozean-tsary an-tseraseran'i Madagasikara, nahazoana alalana
Manahirana matetika ny fahazoana ny sarin-tantaran'ireo firenena voazanaka taty Afrika noho ny famerana fatratra ny fahazoana mijery ireo tahirin-kevitra ara-tantara. Nikaroka ny hamahana izany olana izany i Helihanta RAJAONARISON sy i Tsiry Fy-Tia SOLOFOMIHANTA avy eto Madagasikara ka nametraka ny tantaran'i Madagasikara hahafinaritra kokoa ho an'ny sarambabem-bahoaka tamin'ny fananganana ny Mozea an-tseraseran'i Madagasikara amin'ny alalan'ireo angon-tsary fahiny.
Tamin'ny 27 jolay 2015 no nahaveloman'ny tranonkala ary ahitana ny topimason'ny fiainana andavanandro teto Madagasikara hatramin'ny 1850 ka hatramin'ny 1960. Mndrafitra vanim-potoana efatra lehibe ireo angon-tsary ireo: Vanim-Potoana talohan'ny fanjanahantany, vanim-potoana fanjanahantany, foto-drafitr'asa lehibe, fiainana andavanandro ary fahaleovantena.
Mpanoratra Lova Rakotomalala · Nandika Naomy 7 andro izaytwitter facebook reddit googleplus
Raharaha Ravalomanana: Fampitàna Avy Amin'ny Prezidansa (teny Frantsay) Eto ny fanazavana avy amin'ny fiadidiana ny Repoblika mikasika ny raharaha Ravalomanana. Amin'ny teny Frantsay izy ity, saingy mbola hatolotra eto ny amin'ny teny Malagasy rehefa avoakan-dry zareo ho an'ny sarambabem-bahoaka “tsy avara-pianarana, tsy mahay mamaky/mahatakatra afa-tsy teny Malagasy”
Mpanoratra avylavitra 14 Oktobra 2014twitter facebook reddit googleplus
Tonga eto Madagasikara ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana Tonga alina (12/10/2014) teto Madagasikara Atoa Marc Ravalomanana. Amin'izao ora anoratana izao (13/10/2014 9:54) dia eo ampiomanana handray sy hiresaka amin'ireo mpanao gazety marobe tonga eny amin'ny fonenany eny Faravohitra izy sy ireo mpomba azy. Maro koa ireo olon-tsotra mpanara-dia no tonga eny an-toerana.
Maro ireo karazan'olona tonga manatona eny sy raisiny, toy ireo ray aman-dreny avy amin'ny tanàna niaviany Imerinkasinina, ireo mpitari-pivavahana, sns…
Mpanoratra avylavitra 13 Oktobra 2014twitter facebook reddit googleplus
Madagasikara La Nation: Manomboka Ny Fanenjehana Ireo Tsy Mitovy Hevitra Niteraka resaka be teto Madagasikara ny mikasika ilay artikla faha 20 mikasika ny heloka atao ety anaty habaky ny serasera (cybercriminalité). Betsaka ny ranomainty no efa niraraka, maro ny feo no efa nisandratra sy niakatrakatra nanakiana azy iny, saingy dia lany teny amin'ny Antenimiera ihany moa ilay izy.
Mitranga ankehitriny ny efa nahian'ny maro, raha ity lahatsoratry ny La Nation ity no marina. Mikaroka fatratra an'i Ta Ramses, facebooker mantsy, hono, izao ny fitondràna, noho ity farany manakianaa min'ny alàlan'ny saiitatra alefa ety anaty tambajotra sosialy. Miandry ny tohiny ny mpisera rehetra
Mpanoratra avylavitra 29 Septambra 2014twitter facebook reddit googleplus
Kamerona Filoha Paul Biya: « Tsy ny Boko Haram No Handresy An'i Kamerona… Handavo Azy Ireo Izahay. » Tamin'ny antsafa niarahana tamin'ny radioteleviziona Kameroney (CRTV), niresaka momba ny fanafihana tao Kolofata ihany ny filohan'i Kamerona Paul Biya, ary nihantsy ny vondrona Islamista Nizeriana Boko Haram :
Mpanoratra Dibussi Tande · Nandika Mamisoa 06 Aogositra 2014twitter facebook reddit googleplus
Fahalalahàna miteny Fampidirana An-tranomaizina Malagasy 2 Mpanao Gazety Mpanao gazety roa avy ao amin'ny gazety mivoaka isanandro MADAGASCAR MATIN no nalefa any amin'ny fonjan'Antanimora. Androany maraina, voaantso tany amin'ny Brigadin'i Fiadanana izy ireo. Tsy iza akory ilay nametraka fitaraina fa ny Minisitra Rivo Rakotovao
Nizara ny “statut” an'i Solo Rajaonson i Tantely Rasoanaivo:Vaovao farany: <Fahalalahan'ny fanaovan-gazety: ireo mpiara-miasa aminay, ny Talen'ny Famoahana ny gazety Madagascar Matin, Jean Luc Rahaga sy ny Tonian'ny fanoratana, Didier Ramanoelina dia nampidirana an-tranomaizina any Antanimora. Noho ny fitarainana momba ny fanalam-baraka ny Minisi-pirenena iray. Fiovàna sy fialàna amin'ny taloha hoy ianao?>
Mpanoratra avylavitra 21 Jolay 2014twitter facebook reddit googleplus
Amerika Latina Però: Ny Fitiavana Dia… Fomba Vaovao Hanairana Ny Olon-tinao Hanairany ny olon-tiany mandritra ny tsingerintaona nahaterahany, efa voaomany avokoa ny zavatra rehetra amin'ny fanomezana saribakoly vorodamba goavana, saingy nahatonga azy tsy maintsy handeha tongotra [es] maherin'ny efatra miles (fito kilometatra) nibata ilay fanomezana goavambe ny fitokonan'ny fitaovam-pitaterana.
Mpanoratra Gabriela Garcia Calderon Orbe · Nandika miora 15 Jolay 2014twitter facebook reddit googleplus
Afrika Mainty Tranga Mampihoron-Koditra Noho ny Adi-tany Ao Andranondambo, Madagasikara Nitatitra ny L'Express Mada fa potika ny tanànan'Andranondambo ao atsimon'i Madagasikara [fr] nandritra ny adim-pokonolona niainga tamin'ny adi-tany. Nanomboka ny 20 ka hatramin'ny 22 mey, tsy nisy tafavoaka velona tamin'ny ady an-trano ny mponina ao an-tanàna ambanivohitra. Nampatsiahy [fr] ny iray amin'ireo zandary :
Mpanoratra Rakotomalala · Nandika Jentilisa 25 Mey 2014twitter facebook reddit googleplus
Amerika Latina Nolanian'ny Kongresy Breziliana Ny Lalàna Momba Ny Zon'ny Mpisera Aterineto Lany tao amin'ny Kongresim-pirenenan'i Brezila ihany nony farany ny lalàna Marco Civil ka tokony ho ao amin'ny Antenimieran-doholona indray ny latsa-bato manaraka. Nanjary lohahevitra malaza manerantany tao amin'ny Twitter ny lalàna momba ny zon'ny mpiserasera, taorian'ny fanentanana lehibe natao nandritra ny andron'ny latsa-bato tamin'ny 25 marsa 2014, tamin'ny alalan'ny diezy Twitter #MarcoCivil sy #EuQueroMarcoCivil (Mila ny Marco Civil aho).
Mpanoratra Sara Moreira · Nandika Mamisoa 27 Marsa 2014twitter facebook reddit googleplus
Afrika Mainty Malagasy Miresaka Ny Fakana Sary Mpilatro Sy ny Fitafy SI Swimming Teto Madagasikara Nopihana tao amin'ny Nosy Iranja, teto Madagasikara ny 2014 Sports Illustrated Swimming Suit:
Mpanoratra Rakotomalala · Nandika Jentilisa 26 Febroary 2014twitter facebook reddit googleplus
Madagasikara Nahazo Fampitandremana Ny Haino Aman-Jery Malagasy Rehetra Tanora Mpanao gazety misandratra, Heninkaja Rakotomanantsoa, talen'ny famoahana sy tonian'ny fanoratana ao amin'ny fahitalavitra iray eto Antananarivo, Madagasikara no namoaka izao sata manaraka izao.
Hafatra avy amin'i Heninkaja Vonin'aina Herimonina Rakotomanantsoa.
Mandroandroatra moa ny toe-draharaha eto Madagasikara hatramin'ny niverenan'ny filoha teo aloha voahongana, Marc Ravalomanana, an-tanindrazana indray. Samy mampiady hevitra na ny fomba nidiran'ny filoha teo aloha an-tanindrazana na ny fomba nakana azy tao amin'ny fonenany teto Antananarivo, Madagasikara.
Mpanoratra Jentilisa 15 Oktobra 2014twitter facebook reddit googleplus
Voasambotra Sahady Marc Ravalomanana Vao ora vitsy no nahatongavany teto Madagasikara, dia re izao fa efa voasambotry ny fitondrana amperinasa sahady ity filoha teo aloha ity.
Tampilaminana no nidirany, na dia miendrika fihantsiana ihany aza. Nefa izao fisamborana izao, fisamborana mba hahafahana manohy dinika ve , sa fisamborana vao mainka hamaly ny fihantsiana natao an'ity fitondrana izay efa manomboka maharikivy eny anivon'ny vahoaka ity?
Madagasikara Nisy Nirehitra Tao An-dapa Ambohitsorohitra Fanamarihana: Ny sary rehetra ato dia nalain'i Avylavitra, ary ampiasaina irery ihany ho an'ny Global Voices
Nisy firehetana nahataitra ny maro tao amin'ny Lapan'ny Fiadidiana ny Repoblika tao Ambohitsorohitra io folakandro io.
Tamin'ny 04:55mn no niseho ny firehetana izay nahazo ilay cyprès lavabe tazana avy ety ivelany. Tamin'ny 05:08mn no tonga ny mpamono afo rehefa nantsoina ary tamin'ny 05:20 no maty ny afo
Tsy ny Lapa akory no nirehitra fa trano hazo kely ao anaty fefy, birao nampiasaina ho an'ireo izay nanamboatra ilay Lapa hazo somary ery ambanimbany akaiky Banky Foibe, ary namoiasaina nametrahana tapatapaka hazo tsy miasa intsony.
Hoy ny Jeneraly Ralala Roger, Sekretera Jeneralin'ny Fiadidiana ny Repoblika, nitondra ny fanazavana:
Ahiana ho mety avy amin'ny herinaratra, saingy mandeha ny fanadihadiana ny mety ho nahatonga ny firehetana….Tsy mbola misy ny olona notànana.
Ny Brigade de Recherche no nantsoina hanao ny fanadihadiana. Ary tsy misy olona afaka mivezivezy ao anatin'io toerana io hatramin'izay, indrindra moa fa taorian'ity zava-nitranga ity.
Fa tsy ilaozan'izay hisy mpanararaotra ihany koa moa rehefa mitranga ny toy izao. Noho ity firehetana ity tsy naharitra ela fa nalaky voavonjy, dia tsy maro ny mpanao gazety tena afaka nivalampatra nahazo sary. Misy araka izany ireo olona teny amin'ny manodidina (mpiasa) nahazo sary ahitàna ny afo mijoalajoala. Amidin'izy ireny 100.000 Ariary ny sary nalainy
Mpanoratra avylavitra 03 Oktobra 2014twitter facebook reddit googleplus
Afrika Mainty Andiam-Balala Hita Eto Antananarivo, Madagasikara #valala pic.twitter.com/YHzOx5Q8QU
Namoaka sarin'andiam-balala manemitra an'Antananarivo renivohitr'i Madagasikara ny mpisera Twitter sy facebook maro avy eto Madagasikara. Tsy zava-tsy fahita eto Madagasikara ny fisian'andiam-balala, indrindra rehefa aorian'ny tadion'ny (rivodoza) andro mafana, fa tsy mahazatra kosa ny tanàna lehibe ny mahita izany. Mety handravarava tanteraka eo amin'ny voka-pambolena eto amin'ny firenena izay efa tandindomin'ny mosary hatrany tao anatin'ny taona vitsivitsy izao ny fisian'ny andiam-balala tahaka izao.
Mpanoratra Rakotomalala · Nandika Jentilisa 28 Aogositra 2014twitter facebook reddit googleplus
Eoropa Afovoany & Atsinanana Mandalina Ny ‘Fotoam-piovàn'ny Kanto Sy Ny Fampielezan-kevitra’ ireo Mpanakanto Any Skopje Ny Kooperacija (“Cooperation” na Fiaraha-miasa, teny Makedoniana entina hilazàna ny tranombarotra enta-madinika any amin'ireo tanàna kely), vondrom-panakanto tsy mampidi-bola fa mamelon-tena, dia nampiantrano fampirantiana nitondra ny lohateny hoe “Fotoam-piovàna: Ny Kanto ho Fanentanana Fanoherana ny Tsindrihazolena” [en, mk, misy sary] tany Skopje, vao tsy ela akory izay.
Mpanoratra Filip Stojanovski · Nandika Candy 31 Jolay 2014twitter facebook reddit googleplus
Afrika Mainty “Ahoana no handoavantsika Malagasy ny fitaovam-pianarana, fitafiana ary fanafody ho an'ny ankizy ?” Tojo Fehizoro, Malagasy mpibilaogy iray, namoaka sombin-taratasy (netezana avy amin'ny gazety malagasy iray teto an-tanindrazana) mamehy ny fandaniana kely indrindra ho an'ny ankohonana malagasy iray misy olona efatra ka ankizy ny roa amin'izy ireo, 10 taona sy 7 taona avy. Avoakan'ilay sombin-taratasy lisitra ny fandaniana sy ny anton'izany tsirairay [mg] ary ny fitambaran'ny karaman'ny ray aman-dreny:
Fidiram-bola Isam-bolana Karama isam-bolan'ny ray : 78 USD/volana
Totaliny : 150 USD Fandaniana Isam-bolana
Sakafo maraina (ho an'ny efatra): 16 USD Sakafo atoandro (ho an'ny efatra): 51 USD Sakafo hariva (ho an'ny efatra): 21 USD Sakafo maivana ho an'ny ankizy : 4 USD Hofantrano : 30 USD
Jiro sy Rano : 13 USD saram-Pianarana : 21 USD Arina : 6 USD Savony : 1.5 USD Sira : 0.38 USD
Siramamy : 1.03 USD Totaliny : 233.82 USD Raha jerena ny zavamisy etsy ambony, dia nanontany avy eo i Tojo hoe ahoana no handoavana ny fitaovam-pianarana, fitafiana sy fanafody ho an'ny ankizy. * ny famadihana ny vola Malagasy Ariary ho Dolara US dia 1.000 MGA = 0,42 USD (ny sandam-pifanakalozana dia azonao jerena ato)
Mpanoratra Rakotomalala · Nandika Jentilisa 29 Mey 2014twitter facebook reddit googleplus
Afrika Mainty Nandrodana Trano Fonenana Miisa 3.000 i Kamerona Ary Nahatonga Olona Miisa 15,000 Tsy Manana Trano Fialofana Nanao tatitra ny fanatrehany maso [fr] ny fandravàna trano fonenana miisa 3.000 eo ho eo tany amin'ny faritr'i Nkomba, tanànan'i Douala tao Kamerona ilay mpitoraka bilaogy antsoina hoe Mathias Mouendé Ngamo. Tombatombanana ho mihoatra ny 15.000 ireo mpibodo mipetraka ao amin'ity tobin'ireo tsy manana trano fonenana ity, hita ao amin'ny tanin'ny vondrona miasa ho amin'ny Fampandrosoana sy Fitantanana ny sehatra indostrialy, vondron'orinasam-panjakana tompon'andraikitra amin'ny famoronana faritra indostrialy ao Kamerona:
Manakana ny vahoaka tsy hihoatra ny arofanin'ny fandriam-pahalemana ny polisy sy ny zandary. Maherin'ny 150 ireo mpitandro ny filaminanana manara-maso io fandrodanana trano io. Polisy avy ao amin'ny vondrona manokana mpanatanteraka asa tselatra (ESIR) sy vondrona mpamita iraka No. 2 (GMI2), sy zandary, ary hery manokana izay mpikambana ao amin'ny Iraka Iraisam-pirenena Ho Fanohanana ny Repoblika Centr'Africaine (MISCA) izy ireo. Mitàna basy, kibay ary baomba mandatsa-dranomaso avy ireo mpitandro ny filaminana ireo. Misy fiarabe fandravàna korontana nentin'izy ireo mijanona eny amin'ny kihon-dalana. Baomba mandatsa-dranomaso no atsipy amin'ireo tsy manana trano fonenana izay mikasa ny hanohitra azy ireo. Amin'izay dia miparitaka ny vahoaka.
Andro fahatelo amin'io asa fandrodanana ao Nkomba ity. Fandroahana izay efa nanomboka tamin'ny Alarobia 26 Martsa 2014 tamin'ny 5:00 maraina teo ho eo. Ireo trano voakasika amin'izany dia ireo naorina teo ambonin'ny tanin'ny vondrona miasa ho amin'ny Fampandrosoana sy Fitantanana ny sehatra indostrialy (MAGZI).
Mpanoratra Dibussi Tande · Nandika Erikah 11 Avrily 2014twitter facebook reddit googleplus
Afrika Mainty Tsingerintaona Faharoan'ny Fanentanana Kony 2012 5 Marsa 2014 nanamarika ny tsingerintaona faharoan'ny fanentanana KONY 2012:
Niaraka isika nampalaza an'i Kony sy nametraka ny herisetran'ny LRA teo amin'ny latabatry ny fahalianam-bahoaka sy ny politika. Singa iray amin'ny fanentanana ny fiantsoana ireo mpanapa-kevitra ara-kolontsaina sy ara-politika hiasa any amin'ny sehatra ananany ambaindainy hijoro ho an'ireo kilonga miaramilan'i Kony. Nitarika ny mpitondra antsika ianareo handray andraikitra izay niafara tamin'ny vokatra mivaingana. Ao anatin'ny fankalazana ataonay, dia nanapa-kevitra izahay hisaotra ny mpanao politika izay nanolotra fanomezana ho an'ny fitsarana tamin'ny alalan'ny fanohanan-dry zareo ny KONY 2012. Mpanoratra Ndesanjo Macha · Nandika Jentilisa 10 Marsa 2014twitter facebook reddit googleplus
Afrika Mainty Madagasikara Mbola Miandry Praiminisitra, Governemanta Vaovao Feno katroka ny volana raha nandray ny toerana mahafiloham-panjakana vaovao eto Madagasikara azy ny filoha voafidy Hery Rajaonarimampianina, mbola tsy misy ny marika ahafantarana izay ho praiminisitra vaovao ary governemanta manao ahoana no hatsangany. Mandresy lahatra ny Ma-Laza fa ny tena olana tsy any amin'ny fahafantarana izay ho praiminisitra fa any amin'ny zavatra harosony (hoentiny an-databatra) [fr]: Un technicien hors pair, rassembleur, capable de mener à bien la politique générale du Président de la République. Ce Premier ministre ne devrait appartenir à aucune mouvance politique, en principe.Mais il n’est ni contre Rajoelina, ni contre Ravalomanana. Bref, c’est un oiseau rare qui inspire aux bailleurs de fonds la confiance. Cette personne existe-t-elle ? (Ny praiminisitra dia tokony ho) teknisiana havanana tokoa, mpanambatra, mahatontosa tsara ny politika ankapoben'ny Filohan'ny Repoblika. Tsy tokony ho avy amin'ny ankolafy na inona na inona io praiminisitra io, raha ny tokony ho izy. Tsy hanohitra an-dRajoelina, na hanohitra an-dRavalomanana Raha fehezina dia olona saro-tadiavina itokisan'ny mpamatsy vola. Misy ve izany olona izany?
Tantara Malaza Indrindra Manerantany 16 ora izayKaraibaLahatsary Maneho Gadra Nandositra Tamim-pitokiana Ilay Fonja An-tanàn-dehibe Tany Trinite
2 andro izayEoropa Afovoany & AtsinananaHabaka Fandraharahana Norahonan'ny Mpanao Sivana Rosiana Noho Ny Lahatsoratra Miresaka Bitcoin
20 Marsa 2015FrantsaNetizen Report: Taokanto, Firaisana Ara-nofo Ary Ny Habaka Sosialy